Ministriin Dhimma Alaa Yunaayitid Isteetis Meeksikoo Waliin Mari’achuufi
Ministrii dantaa alaa Yunaayitid Isteetis, Antonii Bilinken
Ministriin dantaa alaa Yunaayitid Isteetis Antonii Bilinken hariiroo biyya michuu Ferensaya waliin jiru fooyyessuu irrati erga hojjetanii booda, qiyyaafata isaanii marii naga eegumsaa Meeksikoo waliin jirutti naannessanii jiru.
Bilinken, kamisa har’aa kutaa Kaalifoorniyaatti erga goranii booda, ministrii nageenya biyyaa Alejandro Mayorkaas fi abbaa alangaa muummicha Merrick Garland waliin Meksiikoo keessatti wal arguu dhaan kan ministeerri haajaa alaa marii dhimmootii nageenyaa kan sadarkaa ol aanaa jedhe geggeessuuf jiru.
Kan Meeksiikoo bakka bu’an ministriin dhimma alaa Marcelo Ebrard fi ministeerri kaabinee damee ittisisaa fi dhaabolii naga eeggumsaa ti.
Ebrard jalqaba torban kanaa akka jedhanitti, Yunaayitid Isteetis meeshaa waraanaa Ameerikaa irraa gara Meeksiikootti yaa’u dhaabsisuuf akkasumas maallaqa dhaaboliin yakkamtootaa fayyadaman faana dha’uu akka gargaaruuf, shakkamtoota jiran hatattamaan gara Meeksiikootti akka ergaman kan fedhan ta’uu ibsanii turan. Yunaayitid Isteetis deddeebii dawaa deddeebisuu dhaabsisuuf tarkaanfiin fudhatamuu isaa arguu kan feetu ta’uun ibsamee jira.